Banyere P&M → A na-eji ihe osise amachi agbakorita ya
Ahụmahụ jikọtara na ọkachamara
E guzobere ọnụ ụlọ ịkwa P&M na 1995 na Rawa Mazowiecka. Site na 2003. anyị na-enye ịkwa akwa, ịkpụ, ịkpụgharị akara na akara nke ọrụ. Anyị na-ejikwa ahịa azụmaahịa na akwa mgbasa ozi.
Ndị ọrụ anyị ruru eru nwere afọ ojuju ọtụtụ afọ, ha nwere obi ụtọ inyere aka na inye ndụmọdụ na usoro nke usoro akara akara kachasị mma - anyị ga-ewere usoro ọ bụla!
Anyị nwere ogige igwe sara mbara nke ọgbara ọhụrụ nke nwere nke ọma, nke enwere:
Igwe eji mkpọchi igbe eji eme njem nke ala - igwe akpaka
Igwe eji mkpọchi igbe na elu na elu nke nwere nnukwu nko - igwe akpaka
Ghaa agịga abụọ
Zụọnụ agịga abụọ
3, 4 na 5 gbochiri
Igwe eji akwa ntụtụ 4 na agịga agịga 12 nwere ike ịkpụ akwa
Ngwaọrụ bọtịnụ Buttonhole
Na paịlị pneumatic
Tebụl a na-egwute ya na ndị na-anya uzuoku
Eji mma bekee na mma bekee belata tebụl ụlọ na 8,5
Anyị na-eche banyere ụdị ngwaahịa anyị kachasị mma
Lọ ịkwa akwa anyị na-ejide n'aka na ngwaahịa ndị anyị mepụtara bụ akwa ndị kacha mma nwere njiri arụ ọrụ dị oke mma na teknụzụ nhicha na nhicha ọ bụla. Anyị na-enwe ike izute ndị ọrụ ngo kachasị achọsi ike site na iji ngwa ọrụ anyị nwere ike. Anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu na ịkwa akwa, ịkpụ na ịkọpụta maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụdị ndị a ma ama.
Onye ahia ahia anyi kacha anyi mkpa
Ndị ahịa nwere afọ ojuju bụ mkpa anyị. Ndụmọdụ ndị dị mma ha na-agba anyị ume ka anyị na-azụlite ma na-ejigide ịdị elu nke ọrụ anyị.
Na-arụ ọrụ na uwe mgbasa ozi
Anyị nwere ụdị ngwaahịa dị iche iche - ihe karịrị 6000 ngwaahịa, uwe ọrụ na uwe mgbasa ozi sitere na ndị na-emepụta amara amaara na ọnụahịa mara mma. Ndị a bụ, n'etiti ndị ọzọ, sweatshirts, caps, vest, uwe, uwe mwụda, uwe elu polo, t-shirts, uwe ọrụ, uwe ndị ọkachamara, uwe ọgwụ, maka ụlọ ahịa oyi na friza, yana akwa akpụkpọ ụkwụ dịgasị iche.
Ihe mkpuchi kọmputa / akwa uwe
Mmepụta ụdị akwa dị iche iche - gụnyere akwa ọkachamara - bụ naanị akụkụ nke ihe anyị na-enye nnukwu. Dika ntinye aka, ndi ahia anyi na enweta ikike nke iji otutu ndi ozo. Anyị na-arụkwa ọrụ ike dị ka omumu ihe omumu ihe, nke bu otu n’ime ebumnuche anyi kacha elu iji nya isi.
Ihe mkpuchi kọmputa bụ ezigbo ụzọ dị mma, mara mma ma dịgidere n’ịgba akara. N'iji akụrụngwa pụrụ iche, anyị na-enwe ike ịme ihe ọ bụla, ọbụlagodi ụkpụrụ nke nha ọ bụla na uwe ọ bụla. Clotheskụnye uwe bụ usoro chọrọ eziokwu zuru oke, mana mmetụta aesthetic dị ọnụ ahịa zuru oke yana mbọ anyị nke teknụzụ ọkachamara kwadoro.
Anyị na-etinye ngwa mkpuchi na ụdị ọ bụla nke uwe (polo shirts, t-shirts, uwe ọrụ, uwe mgbochi, agbatị, ịchafụ), na ekele maka njikọta pụrụ iche, anyị na-enyekwa ọrụ mkpuchi na okpu - anyị ga-enwe obi ụtọ ịkekọrịta ọrụ anyị gara aga.
Egosighikwa anyị ụdị uwe - ụlọ ọrụ anyị nwere akwa ịkwa akwa na ebe ịkpụchapu ya, yabụ anyị nwere ikike zuru oke maka ụdị ihe anyị kwadebeere gị. Ohere ndị a na-enye site na mgbako mgbakwunye kọmputa bụ nnukwu uru maka ụlọ ọrụ na-eje ozi uwe ndị Poland na ahịa mgbasa ozi.
Ulo oru di iche iche bu ihe edere iwu ka okwesiri ibu - maka ndi ozo ka ha buru agha, diri ndi ozo - nkwado. Agbanyeghị, itinye ihe n'úkwù dị, karịa, bụ nkwa nke ịdịte aka na ezigbo ọmarịcha atụmatụ nke na-egosi ịrụ ọrụ dị elu.
Enweghị iwu dị oke ma ọ bụ nke gbagwojuru anya maka ndị otu anyị - ọrụ anyị gara aga na-egosi na agbanyeghị oru ngo a, anyị na-enwe ike ịrụ ọrụ anyị dabere na oge. Anyị nwere ike inye gị mmezu ngwa ngwa - ikike anyị kwa ụbọchị ruru ihe mkpuchi 3000.
Ndị ụlọ ọrụ tụkwasịrị anyị obi
ụlọ ọrụ nwere afọ ojuju
Mbipụta ihuenyo / Mbipụta na uwe
Mbipụta ihuenyo bụ ọrụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịnye gị. Ọ bụ usoro a na-ahọrọkarị maka itinye akara. Ezie na ọ dị mfe iji T-shik silk-screen, ụdị uwe ndị ọzọ dị ka T-shirts, sweatshirts, caps, flece, shirts, wdg na-ele anya dị mma. Ọ bụghị naanị na ọrụ a na - adịte aka ma na - enye ọmarịcha njigide na ịdịte aka, kama na - egosikwa palette ụcha nke eserese ọ bụla ma bụrụ ezigbo usoro.
Ekepụtara teknụzụ nbipụta ihu akwụkwọ a: - otu akwụkwọ nbipụta na-ese n’elu uwe, - n ’ihu akwụkwọ nke nwere ọtụtụ agba
Mbipụta ihuenyo bụ nnukwu usoro nke ịhazi uwe. Usoro a, na-esote ihe mkpuchi kọmputa, bụ otu n'ime ihe ndị kachasị adịgide na nke kachasị mma na-egosipụta agba nke usoro onye ahịa ahụ. N'ihi nke a, agbanyeghị nha na imewe ya, iwu gị ga-abụ nke kacha mma maka ibipụta ihuenyo na uwe (dịka. Polo shirts ma ọ bụ t-shirts).
Site na teknụzụ ya dị elu na nkenke ya, taa anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị ụdị kachasị mma, ma a bịa n'uwe ahụ n'onwe ha, yana akara ngosi a na-etinye na ya, ihe ndị e biri ebi ma ọ bụ eserese. N'ihi mmezu nke ọrụ anyị, anyị nwere ike na-achịkwa usoro niile nke ịmepụta arụmọrụ arụchara.
Anyị na-arụ ọrụ ọ bụla site na iji igwe ọrụ pụrụ iche, ezigbo ihe ndị nwere ezigbo mma na akwa uwe ejikere eji arụ ọrụ na uwe na-echekwa nchedo nke ọma, nke pụtara na ọrụ anyị ga-abụ nke a na-akwanyere ugwu.
chepụta ma gbuo ya: Pixels zuru oke